Kungani kufanele ngisekele ukuhlelwa kwe-website yami yokusesha nge-SEO video marketing?
Ngokuvamile kuthatha isikhathi esiningi nokusebenza ukuze ubone ngisho nezimpawu zokuqala ze-SEO eziletha imiphumela yokuqala. Indlela yokudala ukukhula okunamandla? Udinga ukufaka isisindo sakho sokumisa ukusesha ngokuma ngezinhlelo ezithile zokwenza isikhalazo kokubili izilaleli zangempela kanye nabahlaseli bokusesha. Ngakho kungani ungazami izinhlelo ezithile zokukhangisa kwevidiyo ye-SEO? Kubonakala sengathi inhlanganisela ephelele ukubhekana namakhasimende amaningi angakhona ngenkathi ugcina futhi uthuthukisa abalandeli bakho noma abafundi bakho, akunjalo? Noma kunjalo, ngikholelwa ukuthi izitatimende ezilandelayo mayelana nokusebenzisa i-SEO nokukhangisa kwevidiyo kuzoba usizo ekucatshangweni okucatshangayo.
eshiya kude ngemuva kwemizamo ehlanganisiwe ye-Bing ne-Yahoo. Kusho ukuthini? Akukho lutho, ngaphandle kweqiniso lokuthi abantu bathanda ukubuka amavidiyo. Ngakho-ke, kungani kungadingeki kube umqondo omuhle kakhulu wokungena emakhasini akho wewebhu ngokuqukethwe kwevidiyo okuwusizo noma okujabulisayo? Akuyona nje isipiliyoni somsebenzisi onempilo, kodwa ukuguqulwa okukhulu. Ngokusho kwesilinganiso samanje sokucwaninga, ukuphatha umkhankaso we-imeyili efanele, osekelwa nge-SEO video ukumaketha kungandisa izethameli zakho ezingahle zize ngokusebenzisa ukubhaliswa kwe-imeyili ngo-51%. Abantu bathi ukufaka ikhasi lakho lokufika ngevidiyo lekhwalithi kubonakala sengathi liphinde lithembise, libe ne-2-fold increase in conversion. Njengoba sekushiwo kakade, inhloso eyinhloko ye-Search Engine Optimization ngokwayo ukugcina ukuphonsa ukuguqulwa okwengeziwe, ngenkathi uthola ukuhola kwekhwalithi. Yingakho ngizizwa ngikhululekile ukufaka isicelo, okungenani izindlela eziyisisekelo zokukhangisa kwevidiyo ye-SEO iminyaka emibili kakade, futhi nakanjani awuzisoli nakanjani.
Yenza kube khona ukuqina okukhona ku-inthanethi
Phakathi kwezinhloso ezibalulekile kakhulu ze-SEO ukugcina nokuqinisa amandla egama lakho negama, nokuqwashisa amakhasimende ebhizinisi lakho Inthanethi. Ngaleyo ndlela, ukusebenzisana ne-SEO video marketing kungasiza ukuqinisa izikhundla zakho zamanje nakakhulu. Ukuba nokuqukethwe okukhulu kwevidiyo okukhangayo kuzilaleli ezihlosiwe kusho ukuthi iwebhusayithi yakho iba umholi ngaphakathi kwe-niche yakho yemakethe, inikeza ulwazi oluwusizo nolwazi olufanele njalo, kanye nokuphendula imibuzo evame kakhulu yabasebenzisi. Konke okuzokwenza izivakashi zakho ngezikhathi ezithile zibe ngabalandeli abazinikezele, hhayi ukusho amaklayenti wangempela.
Shiya abaphikisi bakho ngemuva, ukushayela iwebhusayithi yakho nge-SEO video marketing
Umncintiswano wamanje we-inthanethi uvame ukuqina Abanikazi bebhizinisi balwela ama-niches afanayo noma izithameli ezihlosiwe, ngakho-ke ukubheja ngokufana kakhulu, hhayi ukusho amagama angukhiye afanayo namagama abalulekile. Kodwa manje ithonya elikhulayo lokuqukethwe kwevidiyo lenza liboniswe phezulu kwe-SERPs, ngesandla esisendelene nokuqukethwe kombhalo wangempela. Yingakho ungalokothi ulahlekelwe leli thuba elihle kakhulu ukushaya ngokushesha abaphikisi bakho, okungenani lezo ezithola ngaphandle kokukhangiswa kwevidiyo ye-SEO. Vele ukhokhe isikhathi nemizamo yokuqukethwe kwevidiyo okuthakazelisayo neyigugu, hhayi kulokho okuthunyelwe kwebhulogi noma i-infographic ozoyihambisa kuleli sonto, isibonelo Source .